The Telegram uye Voice of the North, Gauls inotsanangurira mutauriri wepurezidhendi - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO The Telegram neThe Voice of the North, Gauls inotsanangurira mutauriri wepurezidhendi
Emmanuel Macron anoyera kukosha kwake kwose muEuropean campaign, mukati pevhiki yevhoti, kuburikidza nehurukuro yehurukuro yekudhinda. Nzira yekutsoropodzwa pamusoro pezvakanaka nekupikisa kwake uye ... pane chimiro chevamwe veparidzi vaenzi, vasina kuonga "zvisarudzo" zveElysee maererano nekutungamirirwa kwekutaura kwepurezidhendi.
Emmanuel Macron akambororwa nemasangano ezvenhau? Uku ndiko kuchinja kwemamiriro asina kujairika. Muvhuro 20 Mangwanani masikati, panguva yehurukuro yakapiwa neMusoro wehurumende mushure mekudya kwemasikati naDonald Tusk, Mutungamiri weEuropean Council, vatapi venhau ve Breton zuva nezuva The Telegram uyewo pamwe naye wekumusoro La Voix du Nord haana kuratidza.
As the @lavoixdunord, @LeTelegramme haana kuda kuita maererano nehurukuro yaMutungamiri pamwe chete @EmmanuelMacron iyo mitemo yekuregererwa kwekuzivikanwa kwezvinyorwa zvemahofisi emasangano uye nharaunda dzavanomirira.
- Hubert Coudurier (@HubertCoudurier) Dai 20, 2019
"Apo patinokurukura hurukuro, tinogona kurambaAnoti kuna USAinformations Hubert Coudurier, mutungamiri weruzivo rweBreton zuva rega rega, iyo iri mufananidzo yakaramba iripo about uye kutsanangura mukururamisa kwayo kwechigumo ichi chekusati kwawana.
"Nguva iyo pepanhau redu rinomirira kutaura kwevanhu uye nguva iyo vatungamiri vedu vanoda kuongorora mukakavadzana hakusi nguva dzose inoenderana", inogamuchira Le Telegramme.
Kune rumwe rutivi rwe La Voix du Nordtinoisa pfungwa pa "i". Mharidzo yaro inotora the feather kuti ruramisire sarudzo yakadai kune verenga. Mune zvimwe zviitiko, mutungamiri wehutungamiri wekukurukurirana yakanga isiri kufanirwa kwemahofisi maviri ehurukuro.
Pakutanga, mupepeti wekumusoro kwekuyeuka zuva nezuva kuti haachazobvumirwi zvikumbiro zvekudzorera kubvira January 2018, zvinowanzodiwa muFrance pakati pezvematongerwo enyika. Kuzvipira kwaizove kwakambove kuripozvakatsigirwa chaizvoNevadzidzi varo, saizvozvo zvinonzwisisika La Voix du Nord. Pamuganhu weElysee, zvinonzi izvi kuongorora kuongorora kwaivasarudzo"Uye kwete"kudiwaUye iyo "dai takanga taudzwa kwete, kubvunzurudza kwaizove kuchiitika".
The Telegram et La Voix du Nord vakanyanyisa here kune zvikumbiro izvi zvekudzorera? Izvi zvinogona kunzwisiswa nekuverenga kubva kune avo vashandi The Republican Echo: «Chero bedzi iyo inongova nyaya chete yekusimbisa chirevo ... icho, munyaya iyi, chaiva mhoro musi weMuvhuro usiku. Dai izvi zvisirizvo, tingadai takasarudza kuti tisaparidze.»«Kunyanya, tinova nechokwadi chokuti kuverenga zvinyorwa hakurevi kunyora zvakare.»
Cherechedza zvakadaro kuti iyi yakanga isiri chikumbiro chekuverenga kuongorora. Zvechokwadi, shanduro yechinyorwa chakaendeswa kune kugamuchirwa kweElysee yaiva ... pakukumbira kweimba, shanduro yakasiyana, yakanyorerwa panzvimbo ino nevanyori venhau dzakasiyana-siyana.
Asi kunze kwokungoremekedzwa kwemashoko aya, zuva rega rinoita nharo yakasimba: kupa zvishomanana kwevhiki yekuvhota chikwata cheMutungamiriri weHurumende, uyo anonyatsotsigira urongwa hwehuwandu hwake kune veEurope, angave asina kururama. tarisa kune vamwe vanyori:
"Zvakaonekwa kwatiri kuti Emmanuel Macron akaputsa urongwa uhwu hunokosha mukukakavadzana kwevanhu," inodaro La Voix du Nord.
Mutsara wakatochengetedzwa zuva rakapfuura, pamusoro social network, nomunyori-mukuru wemutungamiriri weNordiste uyewo naVaPurezidhendi Mukuru mukuru uye mutungamiriri webhuku racho, pamwe chete nevamwe vavo vebasa revanhu: «mazuva mashanu kusati kwasarudzwa, iyi kubvunzurudzwa kweMutungamiri weRepublic kwaive kwakakodzera kuzvipira, pane urongwa", Anomanikidza Gabriel d'Harcourt pamakrofoni ye USAinformations.
Mharidzo yepepanhau inotsanangura "Ngwarira kuti usafarira runyoro pamusoro pevamweKuyeuka kuti iyo mahofisi ezuva nezuva, "ndeye 18 mamiriyoni evadzidzi". Zvose mune zvose, vateereri vakawanda mune iyi purovhinzi kubva pane yakatanga kubuda kwe "Yellow Vests" uye iyo, apo NR uye Renaissance rwandu dziri pa mutsipa mutsipa, inoita seinokosha kuti ipe hurukuro yekupedzisira yeshoko.
Nharo zvakare inotarirwa ne The Telegramiyo inomiririra kune rumwe rutivi aKutaura nguva yakanyanyisa, mazuva mashanu kusati kwasarudzwa, pasina mubvunzo akabatanidza huwandu husina kukwana hwezvematongerwo enyika huri kuedza kuchengetedza panguva ino.Pepanhau reBreton rinoshungurudza chiitiko "kakanyanya bipolar".
@lavoixdunord haabatanidzi mubvunzurudzo yeE. Macron nePQR. Pamazuva ekutsvaga kwe5, izvi zvinogona kuvhiringidza kushandiswa kwemishonga yemushandirapamwe watinenge tichiedza kuva nechokwadi uye shanduro inoenderana nekuverengwazve kweElysee. Saka hazvina isu. #Macron
- Patrick Jankielewicz (@PJankielewicz) Dai 20, 2019
Ngatitorei chimwe chinhu chaicho La Voix du Nord, achienzaniswa nevezera ravo muFrance yezvepasitoriki yepamusoro: pepanhau remunharaunda reNorth rinotungamirirwa neboka reBelgian Rossel. Iye zvino, Belgium iri nhasi 9e pane 180, mukunyoreswa kwerusununguko rwehurukuro ye RSF. France, inosvika panzvimbo ye32e.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://fr.sputniknews.com/france/201905221041207230-presse-regionale-gaulois-refractaires-macron/
Zviitiko muParis: Gregory Owona anodana "zvinoshamisa" zviitiko
[Tribune] Algeria: imwe hero, vanhu - JeuneAfrique.com